Warbixin:Trump oo La sheegay in Maskaxda looga jiro! - Ceelhuur Online
Home > Caafimaadka > Warbixin:Trump oo La sheegay in Maskaxda looga jiro!
Caafimaadka Wararka Dibadda Wararka Maanta
January 6, 2018 Cali Yare457
Dooddan waxa ay socotay xitaa ka hor intii uusan xafiiska la wareegin, balse hadda waxa ay gaartay halkii ugu saraysay, iyada oo la hadal hayo in da’diisa awgeed ay hoos usii dhacayso awoodda maskaxdiisa. Buugga uu qoray Michael Wolff ayaa lagu sheegay in Trump uu muujinayo astaamo kasii daraya oo ku saabsan in uusan maskax ahaan fiyoobeen.
Madaxweynayaal hore ayaa waxaa haleelay xaalado caafimaad, waxaana ka mid ah madaxweyne Abraham Lincoln, iyo madaxweyne Ronald Reagan oo la sheegay in uu wareeray, islamarkaasna uusan kala garan jirin halka uu markaas ku suganyahay mararka qaarkood .
Dr Farces ayaa sheegay in dooddaha caynkan ah ay caddaalad darro ku tahay dadka xanuunada dhimirka qaba oo aan iyagu waxbo halaynin, balse Trump dartiis loo dhibaataynayo, laguna dhahayo haddalo aanan habboonayn.
Faa-Faahin:Wararkii Ugu Danbeeyay Dad lagu Toogtay Muqdisho iyo Afgooye
Wadamada Islaamka oo si wadajir ah u cambaareeyey Xuutiyiinta Yemen
November 18, 2016 Duceysane
Wafdi Turki ah oo Beri tagaya Hobyo